Mianara mamaky ny teny arabo ho an'ny ankizy
Mianara mamaky ny teny arabo ho an’ny ankizy
Ankehitriny, andeha mandroso ny fahitana ny endriny maro isan-karazany. Eto ny tanjona dia tsy mba mahatonga azy hahatsiaro azy, dia ho sarotra loatra. Ity dingana ity dia hitranga taty aoriana ny whiteboard. Eto, isika dia mampiseho fotsiny ny maso ny fomba ny taratasy no nosoratana tany am-piandohana, afovoany, ary ny farany ny fanampiana ny zanatsoratra. Voalohany indrindra dia dia handeha mba manaova sarintany vaovao amin’ny lokon’ny taratasy tamin’ity indray mitoraka ity. Isika dia mila efatra ravina loko fa isika dia handeha aforeto eo amin’ny antsasaky ny hahazo roa-valo mahitsizoro farantsa. Ireo rectangles, ianao dia manorata in-telo amin’ny taratasy isaky ny teny samy hafa. Izany no fomba milaza ny asan ant, tsikelikely, mba hampandrosoana ny tena tsara izany vokatra izany, izay ny olona mba hahita ny ankizy hamaky ny mendri-kaja coran. Masha Allah, andro, herinandro, volana ny asa, fa misy izany, ny zanany ankehitriny no mahalala ny taratasy sy ny feo ao amin’ny ny fingertips, na ny marimarina kokoa ny tendron’ny lela. Ankehitriny isika dia mifindra any amin’ny zavatra lehibe.
Ny manaraka ny asa dia ho kely kokoa sarotra ho tratrarina, ao ny endriky ny lalao, izay ny maha-zava-dehibe ny manao kely fotoam-pivoriana, ka izay tsy manao izany koa ny enta-mavesatra ho azy. Tsy maintsy mahita ny singa izay manosika sy miasa tsara indrindra eo amin’ny ankizy. Aina ny zaza, hiatrika ny latabatra mba hanombohana ny lesona voalohany ny famakiana. Ny voalohany fanazaran-tena dia azo ampiasaina mba review rehetra ny lesona teo aloha sy fanazarana azy ireo amin’ny mpanelanelana amin’ny tontolo vaovao io. Manomboka amin’ny fanoratana ny taratasy avy amin’ny abidy iray isaky ny mandeha, dia nanontany azy hoe izay taratasy tsy maintsy voasoratra.
Izany dia tokony ho ny tsio-drivotra ho azy
Afaka manoratra ny anarany ao amin’ny tampony an-kavanana ny latabatra sy manendry ny teboka tsirairay ny fotoana fa tsy mahita valiny tsara, dia toy ny mba hahazoana hevitra. Ankehitriny, dia manorata ohatra ny taratasy, ary toy izany koa eo amin’ny tsipika, dia hanoratra ny taratasy, — boalohany, afovoany, ary farany amin’ny alalan’ny fampidirana ny zanatsoratra sy handao ny toerana eo amin’izy ireo. Avy eo dia, dia mangataka azy hamerina na mamaky raha izy no mahalala. Inona no ataonay ho toy ny famakiana:»BA-BI-BOU».
Ho an’ny karatra, fa teo amin’ny latabatra
Hanao toy izany nandritra ny taratasy rehetra. Ankehitriny, izy no mahalala tsara ny feon’ny ny taratasy ary izy dia tsara ny sasany amin’izy ireo eo amin’ny fomba samihafa-tsoratra, dia nanoratra ny taratasy sy ny nanam — fotsiny eto ambany ampiarahina amin’ny teny endrika roa sy telo vaninteny. Mandeha miadana be, hahatonga anao ho tsara, izy efa neken’ny tsara, be dia be ny teny maro sy ny fanazaran-tena. Ao amin ity lesona ity, dia maro ny azo atao tsikombakomba. Manana azy ny mamaky ireo teny ireo sy mampiditra araka ny vaovao taratasy. Ity lesona ity dia maka fotoana be dia be, indrindra fa ho toy izany koa amin’izao fotoana izao, fa isika no manao azy hahita ny telo ela ny zanatsoratra. Dia manomboka indray, na hanohy araka izay tianao. Izany no nahatonga azy hahita ny telo vaovao ela ny zanatsoratra sy ny feo vaovao izay hanitatra. Fantatrao ny fomba ankehitriny, ny zava-drehetra mitranga eo amin’ny latabatra. Hanoratra ny taratasy»BA»amin’ny teny ela»ALIF»sy ny»BA»amin’ny teny ela»Waw»sy ny»BA»amin’ny teny lava ny»LASA»sy ny manontany azy mba avereno. Tany am-piandohana, izany fanatanjahan-tena noho ny teniny dia tena sarotra ho azy, foana ny manoratra teny tena mora vakiana amin’ny teny mora, ny fotoana izay mahazo ampiasaina. Mahatakatra, eto dia miteraka ny zavatra hitanao ao amin’ny boky mianara mamaky ny teny arabo, vao izay no mitranga eo amin’ny latabatra, ary ianao hanatsorana ny fanatanjahan-tena sy manampy be dia be kokoa ny tsikombakomba izay mifanaraka amin’ny zanakao. Eto am-pamaranana, mianatra ny fomba mamaky ny teny arabo ny zaza alohan’ny enin-taona, dia mitaky faharetana, ny kely saina, tsara ny fomba fiasa sy ny kely pedagogy. Fa ambonin’ny zavatra rehetra dia manana ny lehibe sy mahagaga tanjona:»fa ny ankizy mianatra manontolo ny Korany
← Lehibe arabo zazavavy mitady lehilahy amin'ny Rennes Rencontre femme ronde
ChatRoulette - malaza tsy mitonona anarana ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny kisendrasendra vahiny →